ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: Happy Birthday Ma Ngone
Happy Birthday Ma Ngone
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော နေ့ရက်ကလေးတစ်ရက်ပေါ့။ဒဒွေးဘော်ဒါ မငုံ (ကန္တာရမိုးစက်များ)ရဲ့ မွေးနေ့လေ။
လာရောက်ကြသူတွေကတော့ မနှင်း(နှင်းနဲ့မယာ)၊ ညီမလေး ကောင်းကင်(ကောင်းကင်ရဲ့သမီးပျို)၊ ညီမဇော်(ကျွန်တော်တို့အိမ်)၊ အဝေးရောက် ညီမလေး DIM (ဖြူစင်ကြယ် Angle Shaper)၊ အဘူဒါဘီက အမရာ(အမရာ)၊ ကိုကြီးပီတာ(ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်)၊ ကိုဟန်(Dream of My Father)၊ ကိုဖြိုး (လင်းကြယ်ဖြူ)၊ ညီလေးဝေယံ(ဟင်းချက်ခြင်းအနုပညာ)၊ ညီလေးဗျတ်ဇ (ပန်းပွင့်နဲ့ယက်တဲ့ အိပ်မက်)၊ ဘလောခ့်မရေးပေမယ့် ဘလောခ့်အလည်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြသော ဘကြီမိုး (ကိုမိုးဇော်လွင်)၊ ဘကြီးသာယာ(ကိုကျော်သာယာမြင့်)၊ နှင့် ကျွန်တော် ချမ်းလင်းနေ တို့ ဒဒွေးမောင်နှမတွေ ဆုံညီစွာ အချိန်တိတိကျကျကြီးကို တက်ရောက် အားပေးကြပါတယ်ဗျာ။အလည်လာဖို့ဖိတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ မြန်မာဘလောခ့်ဂါ မောင်နှမညီအကို မိတ်ဆွေများ စုံစုံလင်လင်ဖြင် ခင်မင်စရာကောင်းသော မငုံရဲ့ မွေးနေ့လေးကို တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အတီးအမှုတ်တူရိယာ စုံလင်စွာ နဲ့ ဒဒွေးအဆိုကျော် Shania Dim (Shania Twain ရဲ့ အဖေမတူ အမေကွဲ ညီမလေး Angle Shaper) က သီဆိုဖျော်ဖြေပါတယ်။
မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကလည်း ကခုန်မြူးတူးစွာ လာရောက်ကြသူများကို ကြိုဆိုနေပါတယ်။
မငုံအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ။ ပြန်သွားမှ ဖွင့်ကြည့်နော် မငုံရေ။
ကြွက်ဖြူလေးကလည်း သူတပိုင်တနိုင် ရောက်လာပါတယ်။
ဘဝလမ်းခရီးမှာ ရွှေထီးမဆောင်းရသေးဘူးဆိုလို့ မငုံဆောင်းရအောင် ရွှေထီးလက်ဆောင်ပါ။
ရွှေရောင်ထီးလှလှလေးနဲ့ မငုံ ပါ။
ကြွရောက်လာကြတဲ့ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟအပေါင်းများလွန်းလို့ မွေးနေ့ကိတ်မလောက်ရင် အပိုဆောင်ထားတာ အားမနာတမ်းစားကြနော်။ခင်မင်စရာရှမ်းတိုင်းရင်းသူလေး မငုံရဲ့နိုဝင်ဘာ ၂၄နေ့ မွေးရက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းရာချီသည့်တိုင် ရွှေထီးဆောင်းနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 6:08 AM
desertraindrops November 24, 2009 at 6:22 AM
တအား ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုချမ်းရေ။ ကျေးဇူးပါ။ ပျော်ရပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
ကိုရဲ November 24, 2009 at 6:23 AM
HaPpY BiRtHdAy to You HaPpY BiRtHdAy to You HaPpY BiRtHdAy dear of အစ်မ ... HaPpY BiRtHdAy to You !!!
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ အစ်မရေး) ။
မွေးနေ့ ရှင်ရော မွေးနေ့ ကျင်းပပေးတဲ့လူရော
Happy Birthday ပါ မမငုံလေး
မောင်သီဟ November 24, 2009 at 7:21 AM
မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အေးချမ်းသာယာတဲ့
Ree Noe Mann November 24, 2009 at 7:22 AM
happy birthday ပါ မငုံရေ
မိုးစက်အိမ် November 24, 2009 at 7:30 AM
ရွှေထီးနဲ့ကမငုံလား တော်တော်လန်းတာဘဲနော့်ကိုချမ်း
ရေ :D :P Happy Birthday ပါ မငုံရေ :) မွေးနေ့ ပွဲလေး
ကျင်းပ ပေးသူကိုချမ်းလည်း ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
mysterysnow November 24, 2009 at 8:30 AM
ကိုချမ်း တော်ချက်ကတော့ ဟွန်း
Nge Naing November 24, 2009 at 8:36 AM
ဖိတ်ထားခြင်း မရှိပဲနဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ မွေးနေ့ရှင်ရော မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးသူပါ ဘ၀ခရီးတလျှောက် မွေးနေ့တရာကျော်ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
လင်းကြယ်ဖြူ November 24, 2009 at 5:07 PM
~ဏီလင်းညို~ November 25, 2009 at 6:07 AM
မွေးနေ့ရှင်အစ်မကို မသိဖူးပေမယ့် ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ...။
chocothazin November 25, 2009 at 10:23 AM
☣ နှစ်ချို့ဘလက်ကော်ဖီ ☣